ရုသ၏ အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်း| ENGLISH TITLE | Real Conversion
ရုသ၏ အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်း
ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ် ဟိုင်မာ ဂျေအာရ်၏-၂၀၁၁ ၊ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာလ(၆) ရက်၊ လောစ့်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအ ဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Morning, November 6, 2011
“ရုသက၊ ကျွန်မသည် ကိုယ်တော်ကို မစွန့်ပါရစေနှင့်၊ နောက်တော်သို့မလိုက်	ဘဲပြန်သွားစေခြင်းငှါမပြုပါနှင့် ကိုယ်တော် သွားလေရာရာသို့ ကျွန်မလိုက်ပါ မည် ကိုယ်တော် အိပ်လေရာရာသို့ ကျွန်မအိပ်ပါမည် ကိုယ်တော်အမျိုးသည် ကျွန်မအမျိုး၊ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ကျွန်မဘုရားဖြစ်ပါစေ။ (ရုသ ၁း၁၆)။
ဤပုံပြင်ဝတ္တုသည် ရိုးရှင်းလှပါသည်။ တရားသူကြီးတို့ အုပ်စိုးသောခေတ် ယုဒပြည်တွင် အစာခေါင်းပါးခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ နောမိသည် ခင်ပွန်းသေဆုံးသွားသဖြင့်၊ သားနှစ်ယောက်နှင့်အတူ ဗက်လင်မြို့ကို စွန့်ပြီးဘာသာတရားမဲ့သော မောဘပြည်သို့ သွားရောက်တည်ခိုခြင်းငှါ သွားကြ၏။ သားနှစ်ယောက်တို့သည် ဘုရားမသိသော အမျိုးသမီးများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြသည်။ နောမိ၏ ခင်ပွန်းလည်း သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပြီးနောက် သားနှစ်ယောက်လည်း သေဆုံးပြီးဖြစ်သည်။ နောမိသည် ချွေးမနှစ်ယောက်ဖြစ်သော ဩပနှင့် ရုသတို့နှစ်ယောက်နှင့် ကျန်ရစ်ခဲကြ၏။ ထိုချွေးမနှစ်ယောက်စလုံး၌ သားသမီးမထွန်းကားခဲ့ချေ။
နောမိသည် အစာခေါင်းပါးခြင်း ကာလကုန်ခါနီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိသောအခါ၊ ဗက်လင်မြို့သို့ တဖန်ပြန်သွားဖို ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ နောမိက ချွေးမနှစ်ယောက်အား မိမိတို့ မိခင်ထံပြန်သွားဖို့ ပြောခဲ့၏၊ မိမိတစ်ယောက်သွားတည်းသာ ဗက်လင်မြို့သို့ ပြန်လှည့်ရန် ပြောခဲ့သည်။ ထိုချွေးမနှစ်ယောက်က “အကယ်စင်စစ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် အတူကိုယ်တော်
၏ အမျိုးထံသို့ လိုက်သွားပါမည်ဟု ဆိုကြ၏။” (ရုသ ၁း၁၀)၌ ဖေါ်ပြရေးသားထားပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း နောမိက မိမိတို့ လူမျိုးထံသို့ ပြန်သွားရမည်ဖြစ်၍၊ သင့်အမျိုးတို့ထံ ပြန်သွားကြဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ထိုချွေးမနှစ်ယောက်စလုံးက နောမိကချစ်ကြသည်။ နှစ်ယောက်သား ငိုယိုခဲ့ကြ၏။ သို့ပါသော်လည်း ဩပသည် နောမိကို နုတ်ဆက်နမ်းပြီး သူ့လူမျိုးနှင့် သူ့ဘုရားနောက်သို့ ပြန်လှည့် သွားခဲ့သည်။ (ရုသ ၁း၁၅)။ နောမိက၊ ရုသအား မိမိတို့မိသားစု ထံပြန်သွားဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့သော်လည်း ငြင်းဆန်းခဲ့သည်။
“ရုသက၊ ကျွန်မသည် ကိုယ်တော်ကို မစွန့်ပါရစေနှင့် နောက်တော်သို့ မလိုက်ဘဲပြန် သွားစေခြင်းငှါ မပြုပါနှင့်၊ ကိုယ်တော်သွားလေရာရာသို့ ကျွန်မလိုက်ပါမည်၊ ကိုယ် တော်အိပ်လေရာရာသို့ ကျွန်မအိပ်ပါမည် ကိုယ်တော်အမျိုးသည် ကျွန်မအမျိုး၊ ကိုယ် တော်ဘုရားသည် ကျွန်မဘုရားဖြစ်ပါစေ (ရုသ ၁း၁၆)။
ဤသည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ရုသ၏ အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်းအတွေ့အကြုံပင် ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ပါတ်သက်၍ အချက်(၄) ချက်အားဖြင့် ကောက်နုတ်တင်ပြပါသည်။
၁။ ပထမ၊ ရုသသည်၊ ဘုရားလူဖြစ်သော ယောက္ခမအားဖြင့် ဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းခံရသည်။
ရုသသည် နောမိ၏ ထိန်းသိမ်းဩဇာလွှားမိုးမှုအောက်၌ ရှိနေခဲ့သည်၊ အကြောင်းမှာ သူသည် နောမိကို ချစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ရုသသည် ဘုရားမသိသော မိသားစုမှ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ရုသသည် နောမိကို ချစ်ခြင်းအားဖြင့် သူ့မ၏ ဘာသာရေး အသိအမြင် အသစ်ကို ဖန်းတီးပေးရာရောက်ပါသည်။
အပြစ်လောကမှ အသင်းတော်သို့ ရောက်လာကြသော သူတို့သည် ခရစ်ယာန်တို့၏မေတ္တာ၊ ဂရုဏာကို ခံစားစေပါက သူတို့ အသက်တာပြောင်းလဲစေ ပါမည်ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားတခုစတင်၍ သိမြင်လာစေပါသည်။ ခရစ်ယာန်တို့သည် အသင်းတော်များ၌ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာစိတ်ထားဖြင့် ဖေါင်းဖော်ကြ နေပါလားဟူသော ခရစ်ယာန်တို့၏ မေတ္တာကို ခံယူလာမည်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲသော တနင်္ဂနွေနေ့၊ ပထမအကြိမ်လာရောက်ခြင်းဖြစ်သော လူငယ်တဦးက ခရစ်ယာန် တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဘူးဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည် ထိုလူငယ်က ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ပြောကြားသည်မှာ၊ သူကို အသင်းတော်သို့ တွဲခေါ်သောသူတို့သည် သဘောမနောဖြူစင်သူတွေပါ၊ သူ့ကို မေတ္တာပြသ ချစ်ခင်ကြပါသည်။ သူထပ်၍ ဘုရားကျောင်းကို ပြန်လာမည်၊ မလာမည်ကိုတော့ မပြောနိုင်ပေ။ နှစ်ကာလကြာညောင်းသောအခါတွင် သူသည် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ ပြုစုယုယမူကို လွှမ်းဆွတ် သတိရ နေမည်ဖြစ်သည်။
အများသော သူတို့သည်လည်း ရုသကဲ့သို့ ဘာသာတရားမဲ့ နောက်ကြောင်းအားဖြင့် အသင်းတော်သို့ လာရောက်ကြသူများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စား လာကြမည်ဖြစ်သည်။ ရုသကို နောမိချစ်သကဲ့သို့ အသင်းတော်၌ရှိ ယုံကြည်သူများကလည်း ဘုရားကျောင်းကို လာကြသော သူတို့ကို ချစ်ခင်ယုယလျှက် ခရစ်ယာန်တို့၏ မေတ္တာဂရုဏာများကို ပြသဖို့လိုပါသည်။
ဤုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်း၌ ဘာပြသနာမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်အသက်၁၃ နှစ်အရွယ်၌၊ ဒေါက်တာနှင့် မစ္စစ့်၊ ဟင်နရီ၊ အမ်၊ မဂ်ရိုဝန် ၎င်းတို့၏ ကလေးသူငယ်များနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်ကို နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သို့ တွဲခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးပြီး အထီးကျန်ဆန်နေသော လူငယ်အရွယ်တုန်းကလွန်ခဲ့သော(၇၅)နှစ်လောက်ကပေါ့၊ အသင်းသူ^သားများ က ကျွန်ုပ်အား ချစ်ခင်ယုယပြီး ခရစ်ယာန်တို့၏ မေတ္တာကို မပြသခဲ့သော်၊ ဒီကနေ့ ဤနေရာ၌ တရားဟောဖြစ်မည်အဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်အပတ်တိုင်း သူတို့၏ အိမ်၌ ညတိုင်းသွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ မစ္စစ့် မဂ်ရိုဝန်က မကြာခဏညစာ ကျွေးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ လူတော်လူကောင်းတို့ထံ၌ ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အသက်ကြွေးဆပ်စရာရှိနေသည်!
ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “သခင်က၊ မြို့ပြင်လမ်းမခြံနားသို့ သွားဦးလော့။ ငါ့အိမ်ကို ပြည့်စေခြင်းငှါ အနိုင်အထက်ခေါ်သွားလော့” (လုကာ ၁၄း၂၃)။ အသင်းသူ^သားများက လူအများတို့ကို နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ချစ်မေတ္တာ၊ဂရုဏာအားဖြင့် အနိုင်အထက် ခေါ်သွင်းကြရပါမည်။ မုဒီက ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပြောကြားခဲ့သည်မှာ “သခင်အမိန့်တော်ကို နာခံလျှက်လုပ်ဆောင်ကြပါစို့!ဟူ
၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ အပတ်တိုင်းအသက်တာ(၁၀)နှစ် အရွယ်(သို့မဟုတ်) (၁၂)နှစ်အရွယ် ကလေး တစ်ယောက်၊ ချီကာဂိုမြို့ရှိ မုဒိ၏ အသင်းတော်သို့ လမ်းလျှေက်သွားခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဘုရားကျောင်းကို ဖြတ်သန်းသွားလာလေ့ရှိသည်။ ဘုရားကျောင်းကို လာရောက်ကြသော ပရိတ်သတ် များအား ကြိုဆိုနေသော အသင်းတော်လူကြီးက ထိုကလေးကို အမြဲတမ်းတွေ့ခဲ့၏ မုဒိဘုရားကျောင်းကို သွားလာနေသည်ကို အသင်းလူကြီးက တွေ့မြင်သဖြင့်၊ တနေ့သော တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ထိုလူငယ်အား “ဘာကြောင့် လမ်းအသွယ်သွယ်ကို ဖြစ်ကျော်ပြီးမှ မုဒိအသင်းတော်ကို ရွေးသွားရသလဲ?၊ ဘာကြောင့် ဤဘုရားကျောင်းကို မလာသလဲ? ဟုမေးခဲ့ရာတွင်၊ ထိုလူငယ်က “မလာနိုင်ဘူး ခေါ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုတော် မုဒိ ကျောင်းကိုပဲ သွားမည်ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းတွင် ထိုလူငယ် အဘယ်မျှလောက် အချစ်ခံရသည်ကို သူတို့နားလည်မည်ဖြစ်သည်။
အသင်းတော်သူ^သားများက တပါးသူတို့အား ခရစ်ယာန်တို့၏ မေတ္တာဂရုဏာကို ပြသလျှက် အနိုင်အထက် ခေါ်သွင်းရပါမည်။ မုဒီက ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “မေတ္တာနှင့်ချစ်ပါ” သခင့်အမိန့်ကို နာခံလျှက် လုပ်ဆောင်ကြပါစို့! ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂။ ဒုတိယ၊ ရုသသည် အစမ်းအသပ်ခံခဲ့ရသည်။
နောမိကလည်း “သင်၏ အစ်မသည် အမျိုးသားရင်း၊ ဘုရားရင်းတို့ထံသို့ ပြန်သွား ပြီ။ အစ်မနောက်သို့ လိုက်သွားပါဟုဆိုသော်” (ရုသ ၁း၁၅)။ ဒေါက်တာဂျေဗန်နူန် မက်ကီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ဩပသည် မိမိအမျိုးသားရင်ထံ ပြန်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့၏။သင်သိသည့်အတိုင်း သူမ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်က ဘုရားရှင်အပေါ် မသေချာခဲ့ပါ။ သူမသည် ရုပ်တုဆင်းတု နောက်လိုက်သွားပြီး (ပြီးနောက်) သူနှင့် ပါတ်သက်၍ ဘာဆိုဘာမှ မကြားမသိရ တော့ပေ။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume II, p. 93).
ဒေါက်တာမဂ်ကီး ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ နောမိက ရုသအား “အစစ်အမှန် ချစ်သလား၊ မချစ်ဘူလား” ဟူ၍ စမ်းသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ (ibid.).
ဒီကနေ့ နံနက်ဤနေရာ၌ ရောက်လာကြကုန်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်း ထိုသို့အစမ်း သပ်ခံရကြလိမ့်မည်။ တဦးတယောက်တို့က အသင်းတော်ကို စွန့်၍ အဝေးကိုသွားကြ၏၊ ဩပသည် နောမိကို စွန့်တုန်းက ရုသ၊ မြင်တွေ့ခဲ့သလိုပေါ့ဗျာ့! “ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ သူတို့တွေက ရိုးသားကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် အသင်းတော်ကို စွန့်လွှတ်ကြပါလား” ဟူ၍ သင်စဉ်းစားရပါလိမ့်မည်။ ရုသ အစုံအစမ်းခံရသလိုပဲ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလား? ဩပနှင့် ရုသ နှစ်ယောက်စလုံးက နောမိကို “ကိုယ်တော်နှင့် အတူကိုယ်တော်၏ အမျိုးထံသို့ လိုက်သွားပါမည်ဟု ဆိုကြ၏ (ရုသ ၁း၁၀)၊ ယုဒရှင်ကာယုတ်လိုပဲ၊ ဩပလည်း နောမိကို နမ်း၍စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး လောကနောက်သို့ ပြန်လိုက်သွားခဲ့ ၏။ ရုသလည်း ဩပ၏ ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲမှုကို တွေ့မြင်သည့်တိုင် အစမ်းအသပ်ခံခဲ့ရသည်။
မည်သူမဆို အသစ်သော အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲရာတွင် ထိုကဲ့သို့ အတွေ့အကြုံ၊ ကြုံတွေ့ရကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း တစုံတယောက်က အသင်းတော်ကို စွန်းပြီးလောက နောက်သို့ လိုက်သွားသည်ကို တွေ့မြင်ရကြပါမည်။ ယုဒရှင်ကယုတ် စွန့်ခွါသောအခါ ပေတရု တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဒေမစွန့်ခွါသွားသည်ကို ရှင်ပေါလုတွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုက “ဒေမသည် ယခုဘ၀ကို နှစ်သက်သော စိတ်ရှိသည်နှင့် ငါ့ကိုစွန့်ပစ်၍” (၂တိ ၄း၁၀)။ ထိုကဲ့သို့ အတွေ့အကြုံကို ရှင်ပေတရုနှင့် ရှင်ပေါလုတို့ တွေ့ကြုံခဲ့ရကြပါသည်။ သင်လည်းပဲ၊ ရုသ စုံစမ်းခြင်း ခံရသကဲ့သို့ ဤလောက၏ စုံစမ်းခြင်းကို ခံရမည်ဟု မတွေးမိဘူးလား?။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “ငါတို့သည်များပြားသော ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံ၍ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရကြမည်ဟု ဟောပြောပြညွှန်ကြ၏၊ (တမန်တော် ၁၄း၂၂)။ ဓအမငဘကူအေငသညဓ များပြားသော ဆင်းရဲ့ဒုက္ခကို ၊ ဂရိဘာသာစကားအရ၊ ဓအူ့ငဈငျဓ. အဓိပ္ပါယ်မှာ၊ “ ဖိအား” နာကျင်စေသည် “ဒုက္ခများ” ဝေဒနာခံစားသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ “ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖိအားပေးခံရခြင်း”
“ဘေးဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်း ဟူသမျှခံရကြပြီးမှ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲ ဝင်ရကြမည် ဟုဆိုပါသည်”။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ရှည်ကြာသော ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူများ ဖြစ်နေကြပါစေ၊ ဖိအားပေးခံရခြင်း၊ ဒုက္ခဝေဒနာ ခံရခြင်းတည်းဟူသော သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ၏ စွန့်လွှတ်ခြင်းကို ခံရကြမည် အကြောင်းမှာ “ယ္ခုဘ၀ကို နှစ်သက်သော စိတ်ရှိသည်နှင့်”ဟူ၍ (၂တိ ၄း၁၀) ၌ ဖော်ပြ ထားပါသည်။
သူ့၏ ချစ်သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်၊ ယောက်မလည်းဖြစ်သော ဩပ၏ လောကသို့ ပြန်လှည့်ထွက်သည့်တိုင် စုံစမ်းခြင်းကို ရုသအောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ သင့်မိတ်ဆွေက သင့်နှင့် အသင်းတော်ကို စွန့်ပစ်သွားသောအခါ ထိုသို့ စုံစမ်းခြင်းကို သင်ခံရပ်နိုင်မည်လား? သင်အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ နှစ်အတော်ကြာ တရုတ်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်ကတည်းက၊ စောနက မစ္စတာ အရိက်ဖ်ဖက် ဆိုသွားသော ဓမ္မသီချင်းကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့ ပါသည်။
-ပျင်းရိစရာ လမ်းမထက်မှ သခင်သည်ခေါ်လျှက်နေ
”သခင်သည်ခေါ်လျှက်နေ”ကို Ash Grove
မည်ကဲ့သို့ ပင်ဝမ်းနည်းခြင်းကြုံတွေ့ရပါစေ ၊အသင်းတော်ကိုစွန့်ခွါသွားကြပါသော်လည်း သီချင်း၌ ဆိုထားသကဲ့သို့ ဘုရားရှင်က “ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ရှင်နောက် အစဉ်လိုက်ပါမည်။ ပြန်မလှည့်တော့ပါ”ဟူ၍ပြောပါမည်။တမင်တကာ ရည်ရွယ်လျှက် ခေါ်ဖိတ်ခံရကြသော သူများဖြစ်၍ သင်သည်နောက်သို့ မည်ကဲ့သို့ ပြန်လှည့်နိုင်မည်နည်း?စစ်မှန်ပြောင်းလဲသော သူတစ်ယောက်အဖို့ နောက်သို့ ပြန်လှည့်ထွက်ခြင်းဟူသည် မဖြစ်နိုင်ပေ! အာမင်! အာမင်!
၃။ တတိယ၊ ရုသသည် ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်သူဖြစ်သည်။
“ရုသက ကျွန်မသည် ကိုယ်တော်ကို မစွန့်ပါရစေနှင့်။နောက်တော်သို့လိုက်ပြီးပြန်သွား စေခြင်းငှါ မပြုပါနှင့်၊ကိုယ်တော်သွားလေရာရာသို့ ကျွန်မလိုက်ပါမည် ကိုယ်တော် အိပ်လေရာရာသို့ ကျွန်မအိပ်ပါမည်။ ကိုယ်တော်အမျိုးသည် ကျွန်မအမျိုး၊ကိုယ်တော် ဘုရားသည်ကျွန်မဘုရားဖြစ်ပါစေ။(ရုသ၁း၁၆)။
ဤသည် အလျှင်တဆော “ဆုံးဖြတ်ချက်” မျိုးမဟုတ်ပါ။ သူသည် ၎င်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ နှစ်ပေါင်း များစွာ တွေးခေါ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ရုသသည် “အမှန်တကယ်” နောမိ၏ဘုရားကို သူ၏ဘုရားဖြစ်စေလိုပါသည်။နောမိ၏ဘုရားအကြောင်းကြားကြားချင်း ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ အချို့သော အကြောင်းအရာများကြောင့် သင်လည်း ဘုရားသခင်ကို တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ပါမည်။ ရယ်စရာမောစရာ မဟုတ်ပါဘူး။သင်လည်းဘုရားကျောင်းထဲက လူတွေကို အားရကြိုက်နှစ်သက်၍ အသင်းတော်သို့ ကြွလာခြင်းဖြစ် နိူင်သည်။အချို့သောအကြာင်းအရာဖြစ်သော ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်က သင်၏ လုံးလုံးလျှားလျှားအသက်တာကို ပြောင်းလဲစေခြင်းလည်းဖြစ်မည်။ သူတပါးက ဆွဲခေါ်ပြော ဆိုခြင်းမဟုတ် သူတပါးအပြုအမူကို ကြိုက်၍မဟုတ် ဘုရားရှင်က သင့်အားပြောင်းလဲစေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရုသသည် ထာ၀ရအသက်တာအတွက် ဘုရားသခင်နှင့်ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံ၍ ပြောင်းလဲသူ ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာဂျေဗန်နန်မက်ကီးက ပြောကြားရာတွင် “ရုသနှင့်ပါတ်သတ်၍ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ရှင်မဿဲ(၁း၅)၌ ရုသအကြောင်း သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။သူသည် ယေရှုဘုရားဖွားမြင်မည့်ဆွေစဉ် မျိုးဆက် ကိုဦးဆောင် ပြသူလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ (ငဘငိ). အောက်ပါကျမ်းစာကို ရုသ ပြောကြားစဉ် သူအသက်တာ အစစ်အမှန်ပြောင်းလဲ ပြီးဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။သူက ဆက်၍
“ရုသက ၊ကျွန်မသည် ကိုယ်တော်ကို မစွန့်ပါရစေနှင့်။နောက်တော်သို့ လိုက်ပြီးပြန် သွားစေခြင်းငှါမပြုပါနှင့်။ကိုယ်တော်သွားလေရာရာသို့ ကျွန်မလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော် အိပ်လေရာရာသို့ ကျွန်မအိပ်ပါမည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ကျွန်မဘုရားရားဖြစ် ပါစေ’ ‘(ရုသ ၁း၁၆)။
မှန်ကန်သော ပြောင်းလဲခြင်းဟူသည် သင့်အသက်တာ အပြုအမူကို ပြုပြင်ပြီး အသက်တာ တခုလုံး ပြောင်းလဲသွားခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။သို့သော်၊ သင်သည် ဘုရားရှင်သားတော် သခင်ယေရှု ခရစ်တော်ဆီသို့ သင်တိုးဝင်ရမည်။ ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား “ငါ့ကိုအမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူ မျှခမည်းတော် ထံသို့မရောက်ရ”(ယောဟန် ၁၄း၆)။ အဘယ်ကြောင့်နည်း? ရှင်ပေါလုက ဤသို့မိန်တော်မူသည်-
-ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်နှင့် လူတို့စပ်ကြား၊ လူဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော အာမခံတဦးတည်းရှိ၏ (၁ပေ ၂း၅)။
ယေရှုခရစ်တော်သည် သင့်အပြစ်ကြွေးအားလုံးအတွက် ကားတိုင်ပေါ် အသေခံပေးပြီး၊ သူ့အသွေးတော်အားဖြင့် သင်အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောပြီးဖြစ်သည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းငှါ၊ ယေရှုသခင်ထံတိုးဝင် ချဉ်းကပ်ရပါမည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးအချက် တခုကို ဆက်ကြည့်ကြပါစို့!
၄။ စတုတ္ထ၊ ဘုရားသခင်၏ လူတို့နှင့်အတူ ရုသသည် အစဉ်ပျော်မွှေ့၏
ရုသက နောမိအား “ကိုယ်တော်အမျိုးသည် ကျွန်မအမျိုး” (ရုသ၁း၁၆)။ ရုသသည် ရဲရင့်စွာ မောဘအမျိုးမှ ဂျူးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအရာသည် ရုသ၊ ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့ တကယ်လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်ဖြစ်၏။ ရုသသည် အမှန်တကယ် အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ တမန်တော် ရှင်ပေါလုက
“သခင်ဘုရား၌ မှီဝဲသော သူသည် ထိုသခင်နှင့် တစိတ်တဝိညဉ်တည်းဖြစ် ၏။-မတရားသော မေထုန်ကို ကြဉ်ရှောင်ကြလော့။လူပြုတတ်သော အခြား ဒုစရိုက် ရှိသမျှတို့သည် ကိုယ်ပြင်၌ ရှိ၏။ မတရားသော မေထုန်ကိုပြု သောသူမူကား၊ မိမိကိုယ်တိုင်ပင်ပြစ်မှား၏။”(၂ကော၆း၁၇-၁၈)
အပြစ်ပြည့်နှက်သော ဤလောကမှ ရုန်းထွက်လာခြင်းဖြစ်သည် အသင်းတော်သို့ သွားရောက်မိတ်သဟယဖွဲလိုက်ပါ၊ များစွာသောသူတို့သည် ဘုရားကျေင်းဘက်သို့စိတ်တဝက်ရောက်ပြီး လောကဘက်သို့ တစ်ဝက်ရောက်နေကြသည်။ မည်သို့ဖြစ်၍ မှန်ကန်စွာ အသက်တာ မပြောင်းလဲရ သည်ကို အံ့ဩနေကြပေမည်။ အပတ်တိုင်း၊ စနေနေ့ည ဝတ်ပြုအစီစဉ်သို့၎င်း၊ တနင်္ဂနွေနံနက်ဝတ်ပြု ခြင်းအစည်းအဝေင်းနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစဉ်းအဝေးသို့ ကြွလှမ်းခဲ့ကြပါ။ ဒေသန္တရ အသင်းတော်ရှိရာသို့ ကြွလှမ်းခဲ့ကြပါ။ ရုသနှင့်အတူ “ကိုယ်တော်၏ အမျိုးသည်ကျွန်မအမျိုး”ဟူ၍ ကြွေးကြော်ကြစို့! အာမင်! အာမင်! သီချင်းနံပါတ်(၇) ဖြစ်သော “သခင်သည်လာသည်ကျူး” ကို သီဆိုသည်!
သီချင်း-ပျင်းရိစရာ လမ်းမထက်မှ သခင်သည်ခေါ်လျှက်နေ
ဆင်းရဲခြင်းမှ။ ရှေ့သို့ မျှော်ကြည်လိုက်လျှောက်
လောကီမှ အပြုံးမျက်နှာနှင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြည့်စုံကာ
ဝိညာဉ်သား၊ သမီးများအား သခင်သည်ခေါ်လျှက်နေ
နိူင်ငံတော်သို့ သခင်သည် ပို့ဆောင်လျက်နေ
(၁၈၄၁-၁၉၂၆၊ စာရာဒေါဒ့်နေးသီကုံးသော “သခင်သည်လာနေကျူးကို
Ash Grove သံစဉ်အားဖြင့် သီဆိုသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်၊ ဒေါက်တာခရတ်တန်အယ်လ့်ချန်မှ ဟေရှေယ ၁၄း၁၂-၁၅ ကို ဖတ်ကြားပေးသည်။
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ ၁၈၄၂-၁၉၂၆၊ စရာဒေါဖ်နေး သီကုံးသော “သခင်သည် လာနေကျူး” ကို သီဆိုပေးပါသည်။
ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ် ဟိုင်မာဂျေအရ်ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
“ရုသက ၊ကျွန်မသည် ကိုယ်တော်ကို မစွန့်ပါရစေနှင့်။နောက်တော်သို့ လိုက်ပြီးပြန် သွားစေခြင်းငှါမပြုပါနှင့်။ကိုယ်တော်သွားလေရာရာသို့ ကျွန်မလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော် အိပ်လေရာရာသို့ ကျွန်မအိပ်ပါမည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ကျွန်မဘုရားရားဖြစ် ပါစေ” (ရုသ ၁း၁၆)။
၁။ ပထမ ရုသသည် ဘုရားလူဖြစ်သောယောက္ခမအားဖြင့် ဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းခံရသည်။(လုကာ ၁၄း၃၃)
၂။ ဒုတိယ ရုသသည် အစမ်းအသပ်ကို ခံရသည်၊ ရုသ ၁း၁၅ç၁၀ç ၂တိ ၄း၁၀၊ တမန် ၁၄း၂၂
၃။ တတိယ ရုသသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားခဲ့သည်။ ယောဟန် ၁၄း၆ç ၁တိ ၂း၅
၄။ စတုတ္ထ ရုသသည် ဘုရားလူများနှင့်အတူ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့သည်။ ၂ကော ၆း၁၇-၁၈။